Nayakhabar.com: जुम्लामा आठ हजार घरधुरी गरिब, कुन गाविसमा कति गरिब ?
जुम्लामा आठ हजार घरधुरी गरिब, कुन गाविसमा कति गरिब ?
त्यसैगरी, कुडारीमा ४७२, लाम्रामा १६०, महावैपाथरखोलामा ४०७, महतमा ८३, मालिकाबोतामा ८३, मालिकाठाटामा २५५, नराकोटमा ३५५, पाण्डपगुफामा २९३, पातारासीमा २६४, पटमारामा १६८, रारालिहीमा २०९, शनिगाउँमा ५४८, तलिउममा ३७२, ताम्तीमा ३२० र तातोपानीमा ५१८ घरधुरी सिफारिसका लागि सूचीकृत गरिएको जिल्ला विकास समिति जुम्लाका वरिष्ठ कार्यक्रम तथा सूचना अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए।
गत असोज १२ गते नै उक्त सूची आइसकेको र सो दिनमा थप छुटेकालाई थप समय राख्दा समय लम्बिएको थियो ।
सूचना अधिकृत बुढ्थापाले दाबी विरोधमा जिल्लाका चार गाविस कनकासुन्दरी, धापा, विराट र देपालगाउँबाट छुटेको भनी निवेदन आएका कारण सो गाविसबाट पनि समेटिएको बताउनुभयो । आइटी अधिकृत पूर्णबहादुर शाहीका अनुसार विराटमा २३ जना, कनकासुन्दरीमा ६३ जना, देपालगाउँमा ३१ जना र धापामा चार जनाले निवेदन दिएकोमा सो सूचीमा समेटिएको बताए ।
केन्द्रले साउन मसान्तभित्रै टुङ्ग्याउने भने तापनि छुटेकाको विवरण सङ्कलन गर्न समय लम्ब्याइएको समितिले जनाएको छ ।